Yikuphi izindiza ndizela Egypt ezivela eMoscow, isikhathi indiza, abahambi Izibuyekezo
Hhayi ngaso sonke isikhathi sifuna ababaphathise ukunakekela iholide uhambo lwethu opharetha. Ngezinye izikhathi sonke sifuna ukuhlela: uhlaka uhambo, ubhuke amahhotela, ukuthenga amathikithi. Abaningi bangase baphikise: iqembu izivakashi ehlelekile yebo ukuqasha lolo hambo izobiza kancane. Omunye ingaphikisana: kulokhu umuntu kuyoncipha ukuzizwa ukhishwa baboshwa usuku esiyisibopho ukuhamba. Ungakwazi phikisana Ad Infinitum. Lesi sihloko kulabo abakhethe travel ezimele kusuka A kuya Chiliza Ngakho, siqala ukufunda ngazo izindiza ndizela Egypt ezivela eMoscow, ukuze abone isabelomali elula kakhulu noma isikhathi. Futhi intengo ithikithi ithinta ngenkathi indiza senzeka. Phela, Egypt - iyizwe ikakhulu ebhishi iholide, futhi imboni yezokuvakasha ihlangabezana zonyaka ongaphakeme kanye eliphezulu. Lapho undize uye kuleli zwe? Okushiwo ngabantu mayelana uhambo yasoLwandle Olubomvu kokuba ukuphumula?
Lapho undize uye Egypt
On the okusezingeni eliphezulu izivakashi isizini, ukuzama ukwenza travel ejensi hhayi kuphela futhi abanikazi bamahhotela, kodwa futhi abathwali. Egypt njengoba endaweni ethandwa kabili ngonyaka. Kuyinto March no-April, lapho abaseRussia zisuke sezivele zigula ebusika kanye ufuna ilanga, futhi ngo-Okthoba-November, ukunweba ehlobo. Futhi ngenxa yokuthi ezinye zalezikhathi ezimbili intengo izindiza eziya eGibhithe kusukela eMoscow ngokungenangqondo ezibizayo. Inani ithikithi ngamunye ngokwesilinganiso cishe izinkulungwane ezingamashumi amabili nane ruble. Esikhathini okuthiwa "off-inkathi ', okuyinto ezinyangeni zasehlobo, lapho eGibithe eliye ashisayo, zendiza lehla kakhulu. Khona-ke ithikithi indiza efanayo yezindiza kungadla mayelana amabili namakhulu amane namashumi ruble ayisikhombisa. Winter zokungcebeleka of Hurghada futhi Sharm el-Sheikh nazo ukuthatha ikhefu. Kuyinto inkathi ongaphakeme. Amanani izindiza ukuqondisa izindiza ezivela ezinkampanini ezahlukene agcinwe kule uhla ruble ayizigidi 21-23.
Iningi umane ndizela Egypt oqondile. Yikuphi idolobha yezwe Afrika atholakalele inkonzo emoyeni oqondile? Yiqiniso, kuba dolobha yaseGibhithe, Cairo. Yiqiniso, zokungcebeleka amabili ngapha noLwandle Olubomvu - Hurghada futhi Sharm el-Sheikh. Enye ukuthambekela okuvamile - Alexandria. Yikuphi izindiza ndizela laseGibhithe eMoscow? Lena onjalo mastodon yamabhanoyi Russian ngokuthi "Aeroflot". Inkampani ithumela izindiza zayo eCairo kanye ngesonto. Lena indiza njalo, hhayi kuye isikhathi sonyaka. It uhlobanisa izihloko ezimbili nomunye futhi esiphathiswa waseGibhithe - inkampani "EdzhiptEyr". Yena ithumela indiza eGibhithe ukuba eMoscow-Egypt katsatfu ngeliviki. Indlela zokulala oLwandle Olubomvu kahle yezindiza "Transaero". Brilliant Sharm El Sheikh sithumela kanye indiza ngesonto, kodwa ngendlela Hurghada yelinyenti - kabili.
Izindiza ezixhumayo: okuyinto izindiza undiza kusukela eMoscow eGibhithe
umzila okuqondile zokungcebeleka, yebo, inketho esheshayo. Futhi, ngokuvumelana nala mazwi anengqondo, eshibhile. Kodwa umkhuba akunjalo. Ngezinye izikhathi, ukwenza yafakwa kwenye abalulekile endleleni eya eGibhithe kusho indlela eshibhile. Ngaphezu kwalokho, thina ngokushesha enwetshiwe kukhethwa izindiza. Okushiwo ngabantu ngakho libuyekeza? Yikuphi izindiza ndizela laseGibhithe eMoscow? Inketho elula kunazo ukuya resort of Sharm el-Sheikh ne "Pegasus Aerlaynz". Le nkampani Turkish inikeza umzila nge uxhumano e Istanbul. Ithikithi izindiza ezimbili kungadla ruble elinambini lamawaka. "Aeroflot" inkampani inikeza ukwenza indiza emzileni eMoscow-iRoma-Cairo kunani ithikithi ruble eziyizinkulungwane eziyishumi nane namakhulu ayisithupha. Inketho okunye kungaba ukuhamba nge yezindiza Aegean Airlines. Ticket eMoscow-Athens-Cairo kuwufanele nane namakhulu ayisikhombisa namashumi ruble amathathu.
Indlela ndizela laseGibhithe eMoscow nge ushintsho
Yiqiniso, indiza ngqo kuzokusa injongo uhambo lwakho. Futhi uma ugijimele, kungcono ukuze uyikhethe. Kodwa ake ungacabangeli uhambo izindiza ezixhumayo njengoba nokufel 'ukholo okuqhubekayo. Ngempela, ngezinye izikhathi ephaketheni yesikhashana phakathi izindiza ezimbili akuyona ihora noma amabili (izinsalela kuphela ukuthi kwenzeke ezindaweni ukuba sendleleni sezindiza), nokunye okuningi. Futhi abahambi abaningi ngokukhetha izindiza ezixhumayo akuyona ukwehlisa intengo ithikithi, futhi ukubona izwe. Yebo, indiza ngqo Moscow-Egypt uthola eya endaweni ngenxa emine nengxenye noma amahora amahlanu (kuncike hlobo lomkhumbi). Kodwa uma undiza Aleksandriya ne -Turkish Airlines (indiza TK420), kuzodingeka ithuba lokuhlola nokuzwa Istanbul sika. Ukuthembela yezindiza "Emirates» (EK132), uvakashela Dubai, futhi Qatar Airways - Doha. Uma une multivisa, kusivulela ithuba lokuba endaweni Schengen, ungakhetha izindiza ezifana Aegean Airlines, «Lufthansa», KLM, ubone, ngiyabonga kubo, Athens ezikhangayo, eMunich Amsterdam.
Naphezu isimo sezombangazwe, ngokuhlasela kwamaphekula nezinye izinhlekelele ezikhathini zanamuhla, Egypt ngokuqinile kunesithembiso umhole isikhundla ikhefu isabelomali lolwandle. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba ngisho kusukela komncane zezindiza yesifundazwe Russian nsukuzonke (nezikhathi ngezinye izikhathi eziningana ngosuku) rose in izindiza esibhakabhakeni, igcwele egcwele izivakashi. Manje ukuhamba ejensi avutha inkambo ehlukile: izindiza Israeli Eilat, futhi ukusuka lapho ngebhasi ezindaweni zokungcebeleka of Sharm el-Sheikh. Kodwa ake ithemba engcono - ukuthi izinkambo eGibhithe kusukela eMoscow maduze uqhubeke. I ethile kuphela kwezitatimende ezibhalwe phansi zamalungelo wukuthi zindiza zokungcebeleka kuphela - Hurghada, Sharm el-Sheikh, futhi usanda kuthola sezindiza ayo Marsa Alam. E Cairo, Luxor ne-Aleksandriya ukuba uthole izindiza njalo. isihambi Independent akanayo ukuthenga lonke iphakethe amasevisi (ehhotela, ukudluliselwa, ukudla) ukuba ungumlutha ku-sisekelo. Njengomthetho, izinkampani athengisa amathikithi isivuno sisiningi kakhulu ukuba bagcwalise gumbi.
Yikuphi yezindiza inkonzo efuze
Ngaphambi Muscovites kanye nezakhamuzi esifundeni, ukuthola kakhulu noma kukhona ithuba elanele fly elishibhile ezindaweni zokungcebeleka oLwandle Olubomvu. Tours eGibhithe kusukela eMoscow ukukhonza wonke owaziwa izinkampani-zenethiwekhi. Lona S7, "Vim-Avia", "Red Wings", "North Wind", "Airlines Orenburg", "Abakan Avia", le Nord Star, "UTair", "Kolavia" kanye nabanye abaningi. Ukusuka ku zokungcebeleka oLwandle Olubomvu zenziwa kuzo zonke zezindiza eMoscow.
Roshchino (sezindiza) - Tyumen main emoyeni itheku
Barajas Isikhumulo sezindiza (Madrid): Ukufika terminals, wesifunda kanye nebanga eMadrid. Kanjani ukusuka esikhumulweni sezindiza ukuba maphakathi Madrid?
Airline «Belavia»: Boeing 737-300 izindiza kanye Tu-154
Varna Isikhumulo sezindiza: izibuyekezo, izithombe
Indlela unamathelise esiphikisayo phezu kwamanzi? Ngingayithola ushintshe Imitha lamanzi futhi uyivale ngokwakho?
Yikuphi iphilisi i isicanucanu kuyinto ziphumelela kakhulu?
Hamba GT Avalanche Comp 2014: ukubuyekezwa, Ukucaciswa, izithombe
Umhlahlandlela A saqala sika: kanjani ukukhetha ithebhulethi
Ingabe ngidinga ilayisensi umsebenzi wokwakha?
Cindezela hay ngezandla zakhe: incazelo kudivayisi, wesifunda kanye nezincomo
Tow ibha - kuyini? Faka emugqeni donsa
Ibhethri "Gigawatt": abashayeli Izibuyekezo